समाचार - कान्तिपुर समाचार
केसीको गिरफ्तारीप्रति प्रमुख दलद्वारा भर्त्सना
नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई छापामार शैलीमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको प्रति सरकारकै नेतृत्वमा रहेका कांग्रेसलगायत प्रमुख राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन् ।
शितलहर प्रभावित जिल्लामा राहत दिन राजपाको माग
राष्ट्रिय जनता पार्टीले शितलहर प्रभावित जिल्लामा राहत वितरण गर्न र जाडोका कारण मृत्यु भएकाहरुका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नयाँ सरकारको बाटो छिटो खोल्नुपर्छ : नेता पौडेल
माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले कानुनी जटिलताहरु दु्रतमार्गबाट हल गरेर नयाँ सरकारको मार्ग छिटो खोल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
डा. केसीको पक्षमा उर्लियो सोसल मिडिया
डा.गोविन्द केसीले सोमबार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर अनसन सुरु गरेसँगै नेपाली सोसल मिडिया जगत तात्तिएको थियो । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले माफियासँग मिलेर फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए
डा. केसीले बयानमा भने, 'प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई कारबाही गरे न्यायलयको गरिमा बढ्छ (पूर्णपाठसहित)
अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराएका सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
अत्याधिक जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर यहाँ थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार जिल्लाको परोहा नगरपालिका ९ रामपुरखाप बस्ने ७० वर्षीया नुसुरुल्ला खातुन, ६५ वर्षीया मरछियादेवी कुर्मी, सोही नगरपालिका वडा नं. २ का ४५ वर्षीय शेख समीमको मृत्यु भएको छ ।
डा. केसीलाई वीर अस्पताल लगियो
प्रहरीले उपचारका लागि डा. गोविन्द केसीलाई वीर अस्पताल लगेको छ ।सर्वोच्च अदालतमा आज केसीको बयान सकिएपछि केसीलाई अस्पताल लगिएको हो ।
धनकुटामा आमहड्ताल स्थगित, एक सातापछि यातायात सञ्चालनमा
जिल्लालाई प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै आमहड्तालमा उत्रिएका धनकुटावासीले मंगलबारदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् ।
एमाले-माओवादी बैठक : निर्वाचन र सरकार गठनका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन
एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र सरकार गठनका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।
डा. केसीको गिरफ्तारी निन्दनीय : प्राध्यापक सुवेदी
ग्लोवल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष तथा बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक क्यूसी प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले डा. गोविन्द केसीको गिरफ्तारी ‘निन्दनीय’ भन्दै विरोध गरेका छन् ।
श्रीमान् डा. गोविन्द केसीलाई मानहानी लाग्छ भने हामी सबैलाई त्यो लगाइयोस् : गगन थापा (भिडियो)
कांग्रेस नेता तथा सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीलाई मानहानी लागाउने हो भने आफूलगायतका युवाहरुलाई पनि त्यो मानहानी लगाउन न्यायाधीशलाई चुनौती दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा चुनावका लागि १० दल दर्ता
निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि म‌ंगलबार दिउँसोसम्म १० वटा राजनीतिक दलले दल दर्ता गरेका छन् ।
राजधानी माग्दै दिपायलमा धर्ना
प्रदेश राजधानीको माग गर्दै डोटीको दिपायलमा धर्ना कार्यक्रम सुरु भएको छ । आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर संघर्ष समितिले मंगलबारबाट धर्ना कार्यक्रम थालेको हो । संघर्ष समिति संयोजक नरेन्द्र खड्काले लगातारको आमहड्तालले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको हुँदा आन्दोलनको स्वरुप बदलिएको जानकारी दिए ।
डा. केसीको बयान सकियाे, सुनुवाई भाेलि
डा. गोविन्द केसीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो बयान दिने क्रममा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
डा. केसीलाई रिहाई गर्न चिकित्सक संघको माग
नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो आजीवन सदस्य एवं त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई अस्पताल परिसरभित्रबाटै प्रहरीले हिरासतमा लिएको घटना प्रति दु:ख व्यक्त गर्दै यथासिघ्र रिहाईको माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेसमा प्राध्यापक डा गोविन्द केसीलाई गिरफ्तार गरेपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठित ‘प्रा.डा. गोविन्द केसी ऐक्यवद्धता समूह’ले न्याय क्षेत्रले आफ्नो गरिमा घटाएकोमा चिन्ता र आक्रोस व्यक्त गरेको छ ।
अल्पसंख्यक मगन्ता : न पेसा न पहिचान
पुर्खाले माग्ने पेसा अपनाए । त्यही पेशाले मगन्ता जातीले पहिचान पाए । २१ औं शताब्दीमा आएर उनीहरुले पेशा र पहिचान दुबै गुमाएका छन् । न उनीहरुसँग पुर्खौली पेशा रह्यो न पहिचान नै ।
जनकपुरमा डा.केसी पक्राउको विरोध
जनकपुरमा डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
डा. केसीले असहज महसुस गरेपछि आराम गर्न एम्बुलेन्समा राखियो
अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीसँग सर्वोच्च प्रशासनले बयान सुरु गर्न केही समय अझै केही लाग्ने र उनलाई केही असहज महसुस भएपछि एम्बुलेन्समा आराम गर्न दिइएको छ ।
डा. केसीको मुद्दा मिश्र र चालिसेको बेञ्चमा
डा. गोविन्द केसीमाथि लागेको अदालतको अबहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय आमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको बेञ्चमा तोकिएको छ । बयान सकिएपछि मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासमा डा. केसीको मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ ।
डा. केसी सर्वोच्च अदालतमा
अदालतको अबहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई अहिले सर्वोच्च अदालत पुर्‍याइएको छ । केसीलाई बिहान साढे ९ बजे मुद्दा महाशाखाका प्रमुख नारायण पन्थीको कार्यकक्षमा राखिएको छ ।
डा. केसी पक्राउको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन
अदालतको अबहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीको पक्राउको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ । बिहान ८ बजेदेखि नै राजनीतिक दलका नेता, पेसाकर्मी, कलाकार, विद्यार्थी तथा केसी समर्थकले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
डा. केसीलाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगे भट्टराई
अदालतको अबहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् ।भट्टराई मंगलबार बिहान सिंहदरवार वृत्त पुगेर केसीलाई भेटे ।
धनकुटामा आमहड्ताल स्थगित
धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै आमहड्तालमा उत्रिएका धनकुटाबासीले मंगलबारदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् । विगत ६ दिनदेखि जारी आमहड्ताल स्थगित गरिएको छ ।
सवारी लाइसेन्स अब सातै प्रदेशबाट
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सातवटै प्रदेशबाट वितरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको खाका तयार पारेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले प्रदेश सरकारमातहत रहने यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण थालिने जानकारी दिए ।
सामुदायिकको सिकाइ ‘निराशाजनक’
सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर अत्यन्त निराशाजनक रहेको निष्कर्ष शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले निकालेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा २ र ३ का विद्यार्थी जोडा मिलाउन र वाक्य लेखनमा समेत कमजोर पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले गरेको अध्ययनले ६० प्रतिशत विद्यार्थीले नेपालीमै सरल वाक्य लेख्नसमेत नसकेको औंल्याएको हो ।
स्थानीय सरकारको अनुभूति भएन
जिल्लास्थित घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले छिटो लोकप्रियता आर्जन हुनेखालका कामलाई प्रथामिकता दिइरहेका छन् । जुम्ल्याहा उपमहानगरबीच यस्ता काम गर्न प्रतिस्पर्धा छ । कतिपय काममा एकले अर्काको नक्कल गरेको देखिन्छ । कतिपयमा नयाँपन देखाएर मतदाताको मन जित्ने कोसिस पनि देखिन्छ ।
निकुञ्जमा वार्डेन विवाद
वनसचिव युवकध्वज जीसीले उपसचिवमा बढुवा भएका प्रमोद भट्टराईलाई बर्दिया निकुञ्जको प्रमुख (चिफ वार्डेन) मा पदस्थापन गरेको झन्डै दुई महिना भयो ।
आईएफए प्रमुखलाई नयाँ नियम
सरकारले ६० वर्ष नाघेका व्यक्ति परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) को कार्यकारी निर्देशक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखमा सहमति प्रयास
सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलकै सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेको छ । यही प्रयासका कारण सोमबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक हुन सकेन ।